Atodio any amin’ny mpanongam-panjakana ny basinareo Tafika Malagasy ! – MyDago.com aime Madagascar
Atodio any amin’ny mpanongam-panjakana ny basinareo Tafika Malagasy !
Magro 17 Martsa 11
Nanaitra ny kabarin’I Mpitandrina misotro ronono, Jean Claude tetsy amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany : mahantra ny tafika ka manao fo-tanala ny miaramila sy ny mpanao politika hoy izy.
Mitaky ny ra latsaka tamin’ny 1947 ny vahoaka, atodio any amin’ny mpanongam-panjakana ny basinareo . Ratsiraka tamin’ny 1972 vao capitaine de frégate nandray andraikitra rehefa notolorana azy ny fahefana, i Hippolyte Ramarson anefa tamin’ny 2009, vice amiral manda adidy hoy izy.
Ignace indray dia nilaza fa tonga tamin’ny faratampony ny fanongam-panjakana 2 taona lasa izay, fiovana no nokatsahana kanefa fihemorana no hita, ny fahatrana mitombo isan’andro, fanagadrana no betsaka ary tsy nividy olona fa lany daholo. Ny maty maty, ny maratra maratra nefa dia tsy nisy ny fanandihadina ary ny mahagaga dia ny ankolafy Ravalomanan no hampanginina hatrany. Ary atoato dia hisy fisamborana manaraka indray. Tsy ho tapitra ny mpitarika eto fa misolo foana hoy ny tenany.
Tsy mbola nisy eran-tany fahefana niteny hoe manana “pouvoir effectif “nefa tenen’ ny any ivelany fa “sans qualité” hoy hatrany ity solon-tenan’ny Moramanga ity.
I Pst Edouard kosa indray dia nanambara fa amin’ny Sabotsy dia hisy fanambarana mihezinezina hataon’ny ankolafy telo. Roa ny vahaolana ho any i Madagasikara hoy izy, na hapetraka i Maputo ka rehefa tsy mipetraka dia miala i Rajoelina, ireo ihany no vahaolana. Ataovy ampy izay fananagadrana izay. Ary tsy namana ny olona vao misedra tranga sarotrarotra dia mivadika hoy izy. Vao tonga i Dada sy Ratsiraka dia hisy ny olona hiambo fa izy no niady ny fiverenany kanefa tsy nanao izany akory.
Ny fanohananao ny voafonja tsy fidiny dia ny fahatongavana eny amin’ny kianja ihany hoy izy.
Zafilahy Stanislas Rakotomandimby kosa indray dia nampiseho mibaribary fa : fomba fiady ny mpanao politika ny hoe izao na izao fa ny vokatra no aoka hitsara momba ny famerenanana ny filoha Ravalomanana. Ny marina dia samy hafa ny tanjona, ny sasany te ho mandimandina. Aleoko manampy ny any tanana toy izay ho FAT.
Ny vahoaka no mitolona fa ny mpitarika mandrindra fotsiny hoy I Zafilahy. Roa taona androany no nanerena an’i Ravalomanana hamindra fahefana.Mikasika ny raharaha maha voatana ny SG Tim dia nilaza izy fa :
Ireny manameloka an’i Rakotoarivelo ireny nampianarina tsianjery ary mahavariana ny fomba hitondrana ny fanadihadina. Efa nanameloka iny tranga iny izahay ary tsy hamono any i Andry no tanjona fa ny fialany. Amin’ny “procédure pénale” dia tsy tokony hisy ny “enquête parallèle” ary mipetraka aran-dalana ve io rafitra DST io izay sady mandidy no homana.
Fanongam-panjakana fahampiriny ireny omaly ireny ? Ilay feuille de route nivavahana ary nohitsahana sahadyhoy izy.
Ianareo vahoaka no nitondra hatrany ny tolona ary efa hita fa ny FAT dia ny tiany ihany no ataony. Mbola ho avy ny daty tsy hovoasakana intsony ny fiverenan’i filoha Ravalomanana hoy izy.
Jereo Photos Magro 17/03/2011 (1/3), miisa 10
Jereo Photos Magro 17/03/2011 (2/3), miisa 10
Jereo Photos Magro 17/03/2011 (1/3), miisa 05
Ireo mpanongam-panjakana no matahotra antsika vahoaka
Mikorontana tanteraka ny Foloalin-dahy sy ny Tafika Malagasy
Tafika Malagasy tafiditry ny mercenaires Frantsay ?
Auteur Solo RazafyPublié le 17 mars 2011 17 mars 2011 Catégories Magro, Malagasy, Négos, Politique
1 pensée sur “Atodio any amin’ny mpanongam-panjakana ny basinareo Tafika Malagasy !”
18 mars 2011 à 6 h 25 min
Tsy maintsy ho rava foana ny zavatra apetraka sy atao tsy amin’ny rariny!… tsy ho tafapetraka ela io, ary na tafapetraka aza ty aharitra ela, minoa ianareo an’izany!
Fa ny FATn’alika sy ny HATay dia ho foana mandrakizay miaraka amin’ny Foza orana manara-dia azy!
Précédent Article précédent : 3 Videos et Photos 2 Conférences Presse 17/03/2011
Suivant Article suivant : Video – Interview Zafilahy Stanislas 17/03/2011